FAN Silver Jubilee Program Concluded
फ्यानको रजत जयन्ती महोत्सब कार्यक्रम सम्पन्न
२०७४ कार्तिक ३० गते काठमाडौं ।
फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले आफ्नो रजत जयन्ती महोत्सबको अवसरमा पूर्व कार्यसमिति सदस्य लगायत फ्लोरिकल्चर क्षेत्रमा उल्लेखनिय योगदान दिने ७१ जनालाई सम्मान गरेको छ। फ्यानले बिहीबार राजधानीमा मनाइएको रजत जयन्ती महोत्सबको अवसरमा प्रमुख अतिथी माननिय कृषि विकास राज्य मन्त्री सरिता प्रसाईज्यूबाट माला, दोसल्ला र ताम्रपत्र प्रदान गर्दै सम्मान गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा पुष्प व्यवसायको क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने महानुभावहरु, संघ संस्था तथा पुष्प व्यसायीहरुलाई सम्मानित गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमको अवसरमा संस्थाले बिगत २५ बर्ष अवधी भित्र गरेको बिबिध कार्यक्रम तथा गतिबीधि सहितको रजत महोत्सब स्मारिका समेत बिमोचन गरिएको थियो ।
संघीय ढाँचामा देश अगाडि बढिरहेको समयमा संस्था पनि त्यसै अनुरुप संघीय संरचनामा जानुपर्ने फ्यानका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले बताउनु भयो । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोख्रेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठ, वनस्पती विभागका महानिर्देशक डा. अखिलेश्वर लाल कर्ण लगायतको कार्यक्रममा उपस्थिती रेहेको थियो । पुष्प व्यवसायीहरुले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा पुष्प व्यवसायमा सरकारले लगानी बातावरण बनाउन नसक्दा बर्षेनी बिदेशबाट फूल भित्र्याउनु परेको गुनासो व्यक्त गरेको थियो ।
नेपालमा आय आर्जनका दृष्टिले पुष्प व्यवसायको सम्भावना रहे पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । कृषि विकास राज्यमन्त्री सरिता प्रसाईले नेपालमा फस्टाउदो फूल व्यवसायका लागि सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो । उहाँले पुष्प नर्सरी खेती गर्न चाहने व्यवसायीलाई सरकारले ऋणको व्यवस्था गर्ने आश्वासन पनि दिनु भएको थियो । फूल आयात हैन, निर्यात गर्न सक्ने बातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि योजना ल्याउन आग्रह गर्नु भएको थियो ।